नेता पशुपति शमसेर राणा भन्नुहुन्छ : पुनः लोडसेडिङ सुरू भयो, कुलमान घिसिङलाई तुरुन्तै नियुक्ति गर्नुपर्छ । सेयर गरौ ! – Nepal Online Khabar
October 11, 2020 245
दक्ष व्यवस्थापकको पूर्ननियुक्ति होस् भन्ने जनमतको कदर गर्दै घिसिङलाई जिम्मेवारी दिएर जनतालाई क,ष्टमुक्त गर्नु सरकारको बुद्धिमानी हुनेछ।
Prevकुलमान बाहिरीए पछि पटक-पटक बत्ती जानुको कारण यस्तो…हेर्नुहोस् ।(भिडयो)
Next२८ औं दिनमा यसरी तोडियो डा. गोविन्द केसीको अनसन…हेर्नुहोस् । उनी भन्छन जनता फेरि धोका नहोस् !
रञ्जन कोइरालालाई छुट दिने सर्वोच्च अ दालतको फै सला पुनरावलोकन गर्न पूर्ण इ जलासको अनुमति…हेर्नुहोस।
लगानी बढाउन सेयर बजारमा बुक विल्डिङ प्रणाली ल्याइएको हो– रुपेश केसी, सेबोन